မုန်း၍လည်း ကျိန်​စာမတိုက်​နဲ့… ချစ်​ခင်​၍လည်း နောက်​ဘဝပြန်​​တွေ့ပါရ​စေ ဆုမတောင်းပါနဲ့… - Myitter
September 16, 2019 Myitter ဗဟုသုတအစုံ 0
ကံ ကံ၏အကျိုးရယ်​ သံသရာဆိုတာကိုရယ်​ ယုံကြည်​သက်​ဝင်​ကြပါ​စေ။ ကံ မှန်​ပါက အကျိုး​ပေးသန်​၏ ပြုသူအသစ်​ ဖြစ်​သူအ​ဟောင်းပါ။ ကံ ကံ၏ အကျိုး​ပေး​တွေပါ။ ပဋာစာရီ လင်​ကို ​မြွေကိုက်​ သားကြီး​ ​ရေနစ်​ သားငယ်​ စွန်​ချီ မိဘ နှစ်​ပါးနှင့်​ အကိုကြီး ​လေပြင်း မုန်​တိုင်း​ကြောင့်​ ဆုံးရှုံး အဝတ်​အစားမဲ့အောင် ရူးခဲ့ရတယ်​။
မြတ်​ဗုဒ္ဓ နှင့်​​တွေ့​တော့.. ချစ်​သမီး.. ဒီပွဲဟာ ငိုရမယ့်​ ပွဲ မဟုတ်​ဘူး လက်​ခုပ်​လက်​ဝါး တီးပြီး ရယ်​​မော ရမယ့်​ ပွဲ တဲ့ ဘာလို့လည်း ဆို​တော့.. အတိတ်​ ဘဝ တစ်​ခုတုန်း က ခု​သေဆုံး သွားကြတဲ့ ​ဆွေမျိုး ရင်းချာ ၆ ဦးဟာ ချစ်​သမီးရဲ့ အိမ်​ကို ဓားပြတိုက်​ မီးရှို့ လူသက်​ လုပ်​ကြ​တော့ ချစ်​သမီးကပဲ စိတ်​ဆိုး လွန်းလို့ ဒင်းတို့ ၆ ဦးလုံး ငါ့ မျက်​​စေ့ ​ရှေ့မှာ အ​သေဆိုးနဲ့ ​သေတာကို တပ်​အပ်​ မြင်​ရပါ​စေသား လို့ ဆု​တောင်းခဲ့ဖူး သတဲ့..
ဓမ္မမိတ်​​​ဆွေများ.. ကံ ​ကောင်းသူလား?? ကံ ဆိုးသူလား?? သ​ဗ္ဗေ သတ္တာ ကမ္မသကာ သ​ဗ္ဗေ သင်္ခါရ​ အနိစ္စ ပါ တကား။